သုံးနေတဲ့ဆိုင်မှာ Notepad ခေါ်လိုမရလို့ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » ADMINISTRATION BOARD » » Help and Feedback » သုံးနေတဲ့ဆိုင်မှာ Notepad ခေါ်လိုမရလို့ [Problem]
1 သုံးနေတဲ့ဆိုင်မှာ Notepad ခေါ်လိုမရလို့ [Problem] on 19th July 2010, 11:37 am
ကျွန်တော်ထိုင်လေ့ရှိတဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ notepad ကိုပိတ်ထားပါတယ်..window + R တွဲပြီးခေါ်တာမရဘူး။ server က ပိတ်ထားလို့လား မသိဘူး ။ ကျွန်တော် ဒီဆိုက်မှာ တင်ထားတဲ့ Bat File သင်ခန်းစာတွေကိုကောင်းကောင်းလေ့လာလိုမရဘူး ဖြစ်နေလို့ ကူညီပေးကြပါဦး ။ ။
2 Re: သုံးနေတဲ့ဆိုင်မှာ Notepad ခေါ်လိုမရလို့ [Problem] on 19th July 2010, 12:25 pm
အကို ရေ အဲတာ Run box ပိတ်ထားတာလို့ ကျတော် ထင်တယ် အကိုရေ
အဲတာ ဆိုရင်တော့ ဒီလင့်လေးမှာ သွားကြည့်လိုက်ပါ
Run box ပြန်ဖွင့်ပီး သုံးကြည့်လိုက်ပါ
Run box ရပီ ဆိုရင်တော့ notepad ခေါ်လို့ ရပါပီ အကို ရေ
3 Re: သုံးနေတဲ့ဆိုင်မှာ Notepad ခေါ်လိုမရလို့ [Problem] on 22nd July 2010, 2:35 pm
4 Re: သုံးနေတဲ့ဆိုင်မှာ Notepad ခေါ်လိုမရလို့ [Problem] on 23rd July 2010, 9:56 am
Run Box ကိုဖွင့်ဖို့မလိုပါဘူး Mozilla Firefox ကိုသုံးတယ်ဆိုရင် File>Open>C:\_Windows>Notepad.exe ကိုဖွင့်လိုက်ပါ Browser က Download ဆွဲပါလိမ့်မယ် ပီးရင် Double Click လိုက်တော့ ထိုနည်းအတိုင်း cmd,taskmgr, etc....
ပိတ်ချင်တာပိတ်ဗျာ ရအောင်ဖွင့်မှာပေါ့ [You must be registered and logged in to see this image.]
5 Re: သုံးနေတဲ့ဆိုင်မှာ Notepad ခေါ်လိုမရလို့ [Problem] on 23rd July 2010, 11:12 am
URL bar ကလဲရမယ်နော့်
သူ့ ရဲ့ Directory လေးတော့ မှန်အောင်ဖြည့်ဖို့လိုမယ်ထင်တယ်.
6 အစ်ကိုရေ regedit ကိုပါပိတ်ထားရင်ကော ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကျွန်တော်က IT သမားမဟုတ်သေးတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်ဘူး [Problem] on 25th July 2010, 10:49 am
နေဦးသစ် wrote: အကို ရေ အဲတာ Run box ပိတ်ထားတာလို့ ကျတော် ထင်တယ် အကိုရေ
7 Re: သုံးနေတဲ့ဆိုင်မှာ Notepad ခေါ်လိုမရလို့ [Problem]